ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတွေ ဘယ်လိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်သူတွေကို တောင်းပန်ရမလဲ၊ ဘာ့ကြောင့် တောင်းပန်ရမယ်လို့ ပြောရသလဲ ... (ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ ပြောကြားချက်များ)
ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတွေ ဘယ်လိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်သူတွေကို တောင်းပန်ရမလဲ၊ ဘာ့ကြောင့် တောင်းပန်ရမယ်လို့ ပြောရသလဲ ... (ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ ပြောကြားချက်များ)
(ဒိတ်လိုင်း ဧရာဝတီရုပ်သံမှ ကောက်နှုတ်ချက်)
Kyaw Htet said...
စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဟောင်းတွေဆိုပြီးသိမ်းကြုံးမပြောပါနဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့မှာဝန်ကြီးဌာနတွေခွဲပြီးသူ့တာဝန်နဲ့သူ လုပ်နေလိုတပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှာလည်းဌာနတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ တခြားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူ့တာဝန်နဲ့သူ လုပ်နေတာပါမသိပဲနဲ့သိမ်းကြုံးပြီးမပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ ပြောပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုနှိပ်စက်တယ် ညှင်းပန်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော့ဦးခင်ညွှန့်ကအားလုံးဘယ်သိနိုင်မလဲ၊သူ့မှာတခြားနိုင်ငံ့တာဝန်တွေအများကြီးပါ သူကလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေ ကိုနှိပ်စက်ပါ ဘ၀ပျက်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောမှာမဟုတ် ပါဘူး ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းအဲဒီအချိန်တုန်းက တပ်မတော်အစိုးရကအုပ်ချုပ်နေတာပါ၊တပ်မတော်အစိုးရယန္တရားလည်ပတ်နိုင်အောင်အဟန့်အတားတွေအနှေင့်အယှက်တွေ အဖျက်အမှောက်လုပ်ငန်းတွေ ကိုဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရမှာကတပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ရဲကတာဝန်ပါ။အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခပေးခဲံတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်းဦးခင်ညွှန့် ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာအများကြီးပါ။ မနက်၇း၀၀နာရီကနေည၇း၀၀နာရီအထိနေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။အိပ်ရင်လည်းရုံးမှာပဲအိပ်ပါတယ်။သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုတာသိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီခေတ်ပြောလို့ရ တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်စောင်းနငိးထောက်လှမ်းရေးတစ်ဖွဲ့ လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမပြောပါနဲ့။ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာလူရမ်းကားတွေမဟုတ်ပါဘူး.....
The more KNyunt and his associates got busy the worse our MM people got hurt. Go to hell Kyaw Htet with yr sub-human MI.
Yebaw Aung Mao said...
YAR ZAR MIN said...
အဟန့်အတား အနှောက်အယှက်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ ကျော်ထက်